Ụbọchị My Pet » Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru
emelitere ikpeazụ: Oct. 28 2020 | 4 min agụ
Otu n'ime m ndị enyi ya nwoke gwara m na ọ dị mgbe ọ dere a girl onye kparutere mmanya na-egbu mbụ ụbọchị wee agbụpụ niile n'elu ya! Ọ bụ ezie na ekele m akananam na m n'aka na anyị niile nwere ụbọchị na ndị dị nnọọ larịị jogburu onwe, ebe onye mere ihe kpam kpam na-ekwesịghị ekwesị na ị dị nnọọ chọrọ n'ala ga-emeghe na ilo gị dum. Na m mara mma n'aka na anyị niile nwere anyị mma òkè nke a na-kagbuo ikpeazụ nkeji na ọbụna ikekwe na-biliri. Plus anyị na niile nụrụ ihe egwu na-akụkọ banyere mbụ ụbọchị na-aga na-ezighị ezi. Ya mere, ihe na-arahụ na-ezighị ezi na ihe ndị a ndapụta na otú ọ pụrụ ịdị na-ezere. Ọ abịa ala abụọ obere okwu 'mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru'.
Gịnị bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru? Ọfọn m na-eche banyere ya dị ka a set nke obi ụkpụrụ nduzi ndị na-ekwe ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ na-aga were were na-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ndị na-. N'ezie anyị nwere ike mgbe ịchịkwa ihe onye ọzọ na-eme, n'ihi ya, anyị nwere ike na-ahọrọ ịbụ maka anyị onwe anyị omume, na m kweere na ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ na-emeso ndị ọzọ onye ahụ nke ọma na nsọpụrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru mgbe ahụ anyị ga-enwe ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na gh ahụmahụ nke na-akpa anyị onwe anyị. Plus nwere a koodu omume nke onwe anyị pụrụ inye aka ichebe anyị.
Akpa iwu oru pụrụ ịgụnye ihe ndị dị ka mgbe na-akpọ, otú mgbe ị na ozi ọ bụla ọzọ, ma ị-aza ọ bụla na ozi na ekwentị oku, timings na n'azụ oge maka ụbọchị, ihe ị na-eyi, ihe ị atụle na gị ụbọchị, mgbe na-ahụ, ma ọtụtụ ihe otú ị na-emeso onye ọzọ na otú i na-atụ anya ka e si mesoo. Dị ka ị na-ahụ ọ na-ekpuchi ezi a dịgasị iche iche nke akụkụ n'ihi ya, ọ pụrụ ịghọ a bit na-akarị ike mgbagwoju anya. Plus ị ga-ahụ na ndị mmadụ na-enwe ụdị dị iche iche echiche banyere ihe bụ na ọ bụghị na-anabata omume mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, na ihe kasị mma ime bụ ike gị set nke ụkpụrụ nduzi nke na-arụ ọrụ n'ihi na ị, na mgbe ahụ arapara ha. Ozugbo ị n'ezie ga-esi n'ebe ahụ ma na-akpa onye ọzọ i nwere ike ụfọdụ ebe òkè gị ụkpụrụ nduzi na ha ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ, na-atụle ya iji jide n'aka na ị na-ma obi ụtọ ma na nkwekọrịta otú na-akpa ibe pụtara. Nke a na-agụnye ngụkọta n'eziokwu na a ụfọdụ larịị nke okè si ma ndị mmadụ. M kwere na ọ bụrụ na ndị mmadụ mere nke a karịa mgbe ọtụtụ obi mgbawa ga-ezere.
Mbụ ezie, edebe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru bụ maka gị. Mgbe anyị na-akpa àgwà n'ụzọ anyị na-eche ihe ọma banyere anyị na-amalite na-akwado nke anyị onwe anyị na ndị anyị na ùgwù onwe onye na ùgwù onwe onye na-amụbawanye.
Ka ihe atụ, ị pụrụ ikpebi na ọ bụ nsọpụrụ ka onye ị na-dere nanị otu ugboro mara na ọ bụrụ na ị na-agaghị na-ahụ ha ọzọ, ma ọ bụ i nwere ike ikpebi na nke a abụghị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na nwaanyị nwere ike ị họrọ na ị gaghị na-enwe mmekọahụ na mbụ ụbọchị n'ihi na ọ suut ị mma ichere ruo mgbe ị maara onye mma. Ma ọ bụ i nwere ike ike banyere na-adịghị eme nọ na-eche na ụbọchị ma ọ bụ banyere ozi na-laghachiri. Ndị a nile ga-ada n'okpuru 'mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru'.
Lee ụfọdụ mara mma ọkọlọtọ ụkpụrụ nduzi na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahọrọ na-eso dị ka akụkụ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru:
-Na oge maka ụbọchị
Unu guzo onye elu ikpeazụ nkeji
Adịghị na-n'ezie mmanya na-egbu a mbụ ụbọchị
Gbuna abalị niile ekwu okwu banyere gị bụbu (uhere)
Eyi ihe kwesịrị ekwesị maka ụbọchị ị na-aga na
Unu na-akpaghị aka na-atụ anya mmekọahụ na mbụ ụbọchị
N'ezie ọtụtụ ndị ga-nanị na-akpọ n'elu ezigbo àgwà. Otú ọ dị ụfọdụ ndị ọzọ obere intricacies nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru nwere ike ịbụ ndị ọzọ nke a na agba ntụ ebe. Ya mere oge n'ezie na-eche banyere onye ọ bụla nke ebe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-ekpebi gị iwu na ụkpụrụ nduzi maka onye ọ bụla. Ị nwere ike ime ka a guideline na ị na-eme adịghị ụbọchị ndị ikom ndị na-eguzo gị na ikpeazụ nkeji, ma ọ bụ na ị na-eme ọ bụghị ụbọchị ndị inyom bụ ndị ukwuu mbubreyo. Ị nwere ike ikpebi na ha agaghị eyi Obere skirts na a ụbọchị ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị n'ihi na ị chọrọ inye a ọzọ classy echiche. Ụkpụrụ nduzi ndị a ga-adị ka ihe pụrụ iche dị ka ị bụ na ihe dị mkpa bụ iji nweta doro anya na ihe dị ntụsara n'ihi na ị ma ihe na-abụghị na-anakwere maka unu dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ya mere, olee otú ị aka mgbe mmadụ ihe ị na-anaghị amasị? Gịnị ka ị na-eme mgbe mmadụ etịbede onye gị na iwu? Dị ka e kwuru n'ihu anyị apụghị ịchịkwa otú a ọzọ behaves ma ọ bụ anyị ga-achọ. Ya mere, ọ bụ ala ka gị ihe ị dị njikere ịnakwere na ebe ị ga-abịarukwa akara. Ka ihe atụ ma ọ bụrụ na onye gị na ụkpụrụ nduzi bụ na ị na-achọghị ka a nọ na-eche na otu ụbọchị, ma na ị nwere onye bụ mbubreyo, gị na mbụ mgbe nke oku bụ ka ha mara otú ị na-eche banyere nke a. I nwere ike ime nke a na a na-abụghị ụta, n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ nanị site na-ekere òkè otú ị na-eche na ọ bụghị ihe ị chọrọ ke a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mmekọrịta. Otú ọ dị, gịnị banyere ma ọ bụrụ na ha ugboro ugboro agafe gị akara? Ọfọn ị ga-mkpa ikpebi otú ike na akara bụ maka gị. Ọ bụrụ n'ezie na ihe were gị iwe na ị nwere ike anabataghị omume mgbe ahụ ka onye nanị na-agaghị a mma kwesịrị ekwesị n'ihi na ị. Mgbe i na-akọrọ otú obi dị gị ma ọ bụrụ na ha ka na-eme ya na ị ga-ma mkpa ka ọ gaa obi ụtọ na imelite guideline maka onwe gị, ma ọ bụ ị ga-mkpa ha ka ha na-aga. Nke a bụ otú ị na-azụlite obi n'ime gị onwe gị na gị onwe gị ókè.
Rịba ama na maka isi akụkụ, ofụri ibuotikọ emi m kwuru na 'ụkpụrụ nduzi' kama 'iwu'. Nke a bụ n'ihi na m na-eche na ọ dị mkpa ka ị nwere ụfọdụ mgbanwe na onwe gị na okwu nke na na na ịhụ ihe na-ele OK n'ihi na ị ma ihe bụ maa BỤGHỊ anabata. Dị ka ị na-eto eto ma na-agbanwe dị ka onye mere onwe gị nwere ike echiche banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Mgbe a ga-agbanwe, Otú ọ dị, mgbe ị na-arụ ọrụ si ihe ziri ezi n'ihi na ị bụla e nyere n'oge m atụ aro n'ịnọgide na gị onwe gị ókè mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu oru. Mgbe anyị na-agbaji anyị onwe anyị ụkpụrụ nduzi mgbe ọ na-abịa azụ ka ọ taa anyị.
Obi ụtọ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị!